guuguule, Author at Guuguule News Network
Author Archives: guuguule
DAAWO:-Wasaaradda Waxbarashada &Ha’ada AET Oo Deeq Waxbarasho Siiyey 75 Hablood
2nd September 2019	Leave a comment
Hargeysa(GN)Wasaaradda Waxbarashada &Ha’ada AET Oo Deeq Waxbarasho Siiyey 75 Hablood
Hargeysa(GN)Golaha Wasiirada Somaliland ayaa maanta sheegay in beesha caalamku ula dhaqmaan dal madax banaan,isla markaana aan dalka laga hirgalin Karin mashruuc aanay dawladdu saxeexin. Golaha wasiirada oo uu shirgudoominayey madaxweyne Biixi ayaa go;aammo ay ku wada shaqayn doonaan hay’adaha caalamka iyo safiirada dalalka beesha caalamku soo saaray. Qoraal laga soo saaray go;aamadaasi oo uu ku saxeexnaa afhayeenka madaxweynuhu Maxamuud Ducaale ...
Diblumaasi u dhashay Eritrea oo ka codsaday madaxweyne Farmaajo in loo cusbooneysiiyo dhalasho uu ka heysto Soomaaliya
Diblumaasi sare oo u dhashay dalka Eritrea ayaa sheegtay inuu dhalasho ka heysto Soomaaliya, xilligaana uu doonayo in dib loogu cusbooneysiiyo. Estifanos Afwerki, oo sidoo kale ah safiirka xukuumadda Casmara u fadhiya dalka Japan, ayaa shaaca ka qaaday in la siiyey dhalashadaasi sannadku markuu ahaa 1983dii ka hor burburkii dalka. Waxaa kalo uu caddeeyay in dalabkaan hor-dhigay ...
La Dareen Noqoshada Dadka Tabaalaysan iyo Maalimaha Khayriga ah:
“Iyadoo lagu guda jiro Maalimaha ugu Khayrka badan ee islaamka” Waxa ay beryahanba ku heelanayd Wasiirka Wasaaradda Shaqogelinta, Arrimaha Bushada iyo Qoyska Marwo Hinda Jamac Xirsi (Gaani) dardar gelinta iyo kor u qaadida deeqaha Mucaawimo ee la gaaadhsiinayo dadka tabaalaysan reer Somaliland. Wasiir Hinda oo ku suntan u debecsanaanta iyo caawimaada bulshadeeda ay xilka qaran u hayso ayaa ayaamahan khayrka ...
Kulan is Barasho iyo Hadhimo Sharafeed u Samaysay Xubnaha Cusub Daladda Naafada Qaranka SNDF Wasiirka Shaqo Gelinta, Ariimiha Bulshada Qoyska Marwo Hinda Jaamac Xirsi (Gaani)
Hargeysa(Guuguulenews) Waxa Maanta Wasiirka Shaqo Gelinta Arrimaha Bulshada iyo Qoysku ay kulan qado sharaf iyo is barasho ah ugu samaysay Xubnaha cusub ee Dalladda Guud ee Naafada Qaranka Somaliland (Somaliland National Disability Forum) kulankaas oo ugu horeyn Mahad celin ka jeediyey Gudomiyaha Dalada Naafada Qaranka Md Daahir Cabdi Waxaanu wasiirka uga mahad celiyey sida fiican ugu heelan tahay bulshadeena gaar ...
Qaybtii 2aad: Maxsuulkii Nooga Soo Baxay Horumarka Wasaarada ka Samaysa Wasiir Hinda Gaani (Somaliland Youth Educators) Political Research Committee. Gudidda Dhalinyarada Aqoon Yahanada (Somaliland Youth Educators) Oo Wada Qiimayn Wasaaradaha Dalka uguna Horeysiiyey Wasaarada Shaqo Gelinta Arimaha Bulshada iyo Qoyska Somaliland oo saxafada uso bandhigey wax qabadka Fiican qaybtii 2aad. NB: Waxa naga reeban Urur ahaan inaan ku qiimayno masuuliyiinta ...
18th June 2019	Leave a comment
Gudida Dhalinyarada Aqoon Yahanada Somaliland Oo wada Qiimayn Research Wasaaradaha Dalka uguna Horeysiiyey Wasaarada shaqo gelinta Arimaha Bulshada Somaliland oo saxafada uso bandhigey wax qabadka Fiican eek ala kulmeen wasiir Hinda Jama Xirsi. Wasaarada Shaqo-gelinta, Arrimaha Bulshada iyo Qoyska waxay door muhiima ugu fadhidaa Qaranka Jamuhuriyada Somaliland ee uu gadhwadeenka ka yahay Madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo u igmaday wasiirkii ...
Komishanka Qaranka ee Tacliinta Sare ee Somaliland oo Digniin Adag u Diray jaamacada ku Dhaqanta Wax Sharciga Baal-marsan.
18th February 2019	Leave a comment
Hargaysa-February-18-2019-(WW&S)- Komishanka Qarka Tacliinta Sare ee Soomaalilaan ayaa maanta soo saaray warqad digniin ah oo ay u dirayaan jaamacada fullin-weyda shuruucda iyo qawaaniinta u yaala, tacliinta sare ee Qaranka Jamhuuriyadda Soomaalilaan. Warqadan oo uu ku saxeexan yahay, madaxa xafiiska illaalinta iyo dabagalka tayada, isla markaana ah; af-hayeenka Komishanka Tacliinta Sare Prof. Cabdirisaaq Muuse Faarax ayaa lagu sheegay, jaamacaddii u hogaansami ...
Hargaysa, January-07-2018 (Guuguulenews) Gudoomiyaha degmada xariirad ee gobolka selel Md. Ilyaas Xasan Axmed oo aan waraysi la yeelanay ayaa xog-waran naga siiyey xaalada degmada iyo waxyaabaha ay ka qabteen arrimaha bulshada ee degmadaasi. Gudoomiyuhu waxa uu hadalkiisa ku bilaabay; guud ahaan degmada xaaladeedu way wanaagsan tahay haday tahay dhanka ammaanka iyo ta caafimaad ba. Si aan u gudano waajibaadka qaran ...